Visa kuenda kuSaudi Arabia | Dzokorora & Shanda neSaudi maneja
Visa ku Saudi Arabia kuwanda
Iwe une Saudi Arabia!
Tora Visa kuArabhu Yenyika!
Visa kuenda kuSaudi Arabia - Tinoda Middle East. Tora vhiza uye ushande muSaudi Arabia. Dubai City Company, gzvine simba kutaura, ikozvino ichipa kutama kwekuita maitiro kumakambani eSaudi. Saka, kana iwe uchinetseka kuti pane imwe nzira yekuwana a vhiza + basa muSaudi Arabia. Ndokumbirawo kushandisa yedu kambani masevhisi.
Kambani yedu mhinduro kune yako internet kutsvaga. Ingori chete-nguva yekubhadhara pasina kuripa zvekare. Iyo Dubai Kambani inzira yekuwana vhiza yekushanda kana bhizinesi vhiza kana kubatana nevamwe mukati medo reArabic. Tora mukana wehupenyu hutsva neakagadziridzwa account. Imwe yekukurumidza nhanho yekusimbisa uye iwe unogona kuwana bhizinesi idzva nemikana yebasa mu Middle East.
Tama zvakare uye shanda pamwe nevatongi veSaudi
Kutanga neDubai City Company kambani yekutanga Visa Services kuenda kuSaudi Arabia. Tora vhiza uye ushande neakaunti maneja wako inokupa iwe ruzivo rwakakodzera uye mukana kudzidza zvakawanda nezve Saudi Arabia mabasa anopa. Kambani yedu inogadzira mukana wekunze kwenyika. Chinangwa chedu chikuru ndechokubatsira vashandi vanobva kumativi ese epasi kuti vawane vhiza uye vashande kuMiddle East.
Iine yedu vhiza system, unogona kutamira kune guta guru reSaudi Arabia uye vachishanda zvakanyanya pamwe nevarairidzi yepamusoro bhizinesi repasi. Kubva pamisika yemari kusvika kunzvimbo dzinoshamisa dzekutenga. Uyezve kumusoro uko unogona kubatana zvakananga nevashandi uye HR maneja zvakanyanya kubva, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait uye Bahrain.
Kambani yeguta reDubai ndiyo inonyanya kuzivikanwa uye inonyanya kukoshesa Visa mupi weku Middle East. Iye zvino unogona kuva nemukana wekushanda uye kunogara ikoko. DCC inokupa iwe mukana wekutora danho rekutanga kuenda kune rako Middle East rwendo.! Tora basa uye ushande muArabhu Kutaura nyika.
Chikwata chedu chakatarisira kukubatsira kuti upfuure nenzira yakaoma yeVisa kubva A kuenda kuZ nemhuri yako yekutama kuenda kuMiddle East. Sezvo iwe ukagara muRyjiah iwe unokwanisa kutsvaga Basa. Pamwe ipapo ipapo. Zvakare, chete kambani yedu inodzora vhiza maitiro ekugara nevatungamiriri veSaudi. Isu tiri kubatsira nekutengesa tikiti uye nekupa nzvimbo yekugara kwekutanga kwehupenyu hwako hwechiArabhu chitsva mararamiro. Tiri kuve netariro yekuti muchave mumwe wevakadzingwa vanofara. Uye iwe unenge uchishanda mukati meakanakisa maSaja maneja.
Iva wekutanga kuongorora "Visa kuenda kuSaudi Arabia" kukanzura mhinduro